सामाजिक सञ्जालमा घन्टौं भुलिरहने बानीले तपाईंलाई ठूलो समस्यामा पार्न सक्छ ! -
सामाजिक सञ्जालमा घन्टौं भुलिरहने बानीले तपाईंलाई ठूलो समस्यामा पार्न सक्छ !
१ मंसिर २०७५, शनिबार ००:४९ 104 पटक हेरिएको
‘सबैभन्दा ठूलो अपराधी त फेसबुक हो, जेलमा राख्नुपर्ने । त्यसले धेरैको दाम्पत्य धरापमा पारिदिएको छ, धेरैलाई घर न घाटको बनाइदिएको छ । साथी हो, जब तपाईंहरु कारागारबाट बाहिर जानुहुन्छ, त्यो अपराधीबाट बाँच्नुहोला ।’
ठट्यौंली सही, स्ट्यान्ड अप कमेडियन मनोज गजुरेलले हरेक कारागारमा यसै भने । ‘कारागारमा हास्य सिविर’ लिएर पुगेका उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट समाजमा कसरी विसंगती बढ्दैछ भन्ने प्रसंगमा यो ठट्यौली गरेका थिए ।
हालैको एक तथ्यांक चाहि उदेगलाग्दो छ । तथ्यांकले भन्छ, मोबाइल र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नेपालीले भारतीयलाई जितेका छन् । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भारतियभन्दा नेपालीको संख्या बढी पाइयो ।
१८ देशका करिब ४० हजार सर्वसाधरणमा गरिएको सर्वेक्षणले खुलासा गरेको छ, कुल जनसंख्याको दुई तिहाई नेपाली मोवाइल र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् ।
हिजोआज सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने मानिस भेटिन मुस्किल छ । फेसबुक, टि्वटर, हृवाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगाएतका विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता दिनदिनै बढिरहेका छन् ।
स्मार्टफोनमा इन्टरनेटको सुविधा भएपछि त मानिसहरु आफ्नो काम धन्दा भुलेर घन्टौं सामाजिक सञ्जालमा भुल्न थालेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै विशेषगरि युवाहरु सामाजिक सञ्जालको कुलतमा फस्दैछन् ।
सामाजिक सञ्जालले हाम्रो दिमागलाई नराम्रोसँग असर गर्छ । यदि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा कुनै खानेकुराको तस्वीर देख्नुभयो भने यसले भोक बढाउँछ, उक्त खानेकुरा खाँउखाँउ लाग्छ वा गलत समयमा भोक पैदा गर्न सक्छ ।
यसैगरि सामाजिक सञ्जालले मानिसको खुसीमा पनि असर गर्छ । सामाजिक सञ्जालको विभिन्न फाइदाहरु छन् यसले हामीलाई विश्वको कुनै पनि कुनामा भएका व्यक्तिसँग जोडिन सहयोग गर्छ । यसले मानिसको शारीरिक दुरीलाई भुलाउन मद्धत गर्छ ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा घन्टौं भुलिरहने बानीले तपाईंलाई ठूलो समस्यामा पनि पार्न सक्छ जसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
यसैले सामाजिक सञ्जालको लत लाग्न भन्दा पहिले थोरै सावधान रहनुहोस् । वैज्ञानिकहरुले गरेका अध्ययनहरुका अनुसार सामाजिक सञ्जालले हाम्रो दिमागमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । यसले हाम्रो सोच्ने क्षमतामा पनि असर गर्छ ।
सामाजिक सञ्जालले दिनचर्या र बानीहरुलाई बदल्छ । यसले कुनै व्यक्तिलाई भावनात्मक रुपले दुख पनि पुर्याउन सक्छ । यदि तपाईं सामाजिक सञ्जालको लतमा फसिसक्नुभएको छ भने यसले तपाईंको खुसीलाई खोस्न सक्छ ।
आउनुहोस् जानिराखौं सामाजिक सञ्जालले मानिसको खुसीलाई कसरी बर्बाद गर्छः
सामाजिक सञ्जालले मानिसलाई आत्म नियन्त्रण गुमाउन बाध्य बनाउँछ । यसले मानिसलाई आवश्यकता भन्दा धेरै पैसा खर्च गर्न प्रेरित गर्छ ।
सामाजिक सञ्जालको लतमा फसिसकेका मानिसहरुमा यस्तो हुन्छ । यसै कारण तपाईं अन्तिममा हतास महसुस गर्नुहुन्छ र असन्तुष्ट रहनुहुन्छ नतिजा स्वरुप तपाईंको खुसी हराउँछ ।
आजभोली धेरैजसो मानिस आफ्नो अहंकारलाई पुरा गर्न सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्छन् । जसको कारण उनीहरु आफूले के गरिरहेको छु त्यो त्यो वास्तविकता होइन भन्ने भुल्छन् । यसपछि वास्तविकतासँग जब उनीहरुको सामना हुन्छ त्यतिखेर उनीहरु दुखी हुन्छन् ।
अरुको इर्ष्या गर्ने
हामी धेरैजसो आफूलाई अरु मानिससँग आफ्नो तुलना गर्ने गर्छौं यस्तो बानीले पनि हामीलाई दुखी बनाउँछ । धेरैजसो मानिसहरु सामाजिक सञ्जालमा अरु मानिसलाई देखेर मानिसको जीवनशैली र उनीहरुको तस्वीरहरु देखेर इष्र्यालु हुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अरुले प्रयोग गरेका सामानहरु देखेपछि धेरै मनमा आफ्नो साथमा अपर्याप्त चीजहरु रहेको महसुस हुन्छ र उनीहरुलाई धेरै चीजको आवश्यकता छ भन्ने हुन्छ तर खासमा यस्तो हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा अरुको जीवनलाई देख्दा उठ्ने भावनाले तपाईंको खुसीहरुलाई प्रभावित गर्छ ।
धेरै मानिसहरुले आजकाल सामाजिक सञ्जालको कारण आफ्नो आत्मविश्वास वा आत्मसम्मान गुमाउँछन् । एक अध्ययनका अनुसार फेसबुकमा घन्टौं समय बिताए पछि एक तिहाई मानिसहरुले आफूलाई एक्लो महसुस गर्छन् । उनीहरु निराश र क्रोधित महसुस हुन्छन् । खासगरि यस्तो त्यतिखेर हुन्छ जब उनीहरुले आफूलाई अरुसँग तुलना गर्छन् ।
जबदेखि सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फममा मानिसहरुको कुराकानी सुरु हुन्छ त्यतिखेर देखि उहि मानिससँग पनि वास्तविक जीवनमा गरिने कुराकानी पातलिँदै जान्छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै जाँदा मानिसहरु भर्चुअल प्लेटर्फममा कुरा गर्न धेरै मन पराउन थालेका छन् । यससँगै मानिसहरु विस्तारै एक अर्काको वास्तविक भावनाहरुलाई बुझ्न असमर्थ हुँदैछन् ।
हाँसो नै सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रमुख आधार
आमाबुवाकै कारण यस्तो समस्यले ग्रसित हुँदैछन् बालबालिका, क्षण-क्षणमै मुड बद्लिने बच्चालाई कसरी सम्हाल्ने ?
बैबाहिक जीवनमा कस्ता धारणाले गलत प्रभाव पार्छ?
पाको उमेरका पिताका सन्तान “बढी जिनियस”
स्लिम देखिन अब यसो गर्नुहोस्
कपाल झर्न नदिन के के गर्ने ? यस्तो छ ब्युटी एक्सपर्टको सल्लाह !
आफ्नो प्रेम साँचो हो की झुटो , यसरी थाहा पाउनुहोस्